Rastrabani.com | बीपी, जीपी र गणतन्त्र - Rastrabani.com बीपी, जीपी र गणतन्त्र - Rastrabani.com
राष्ट्रपति बनाइदिने प्रस्ताव लिएर आउने मानिसलाई बीपीले भने, ‘यति ठूलो निर्णय गर्नुअघि साथीहरूसँग छलफल गर्न मलाई कम्तीमा ४८ घण्टा चाहिन्छ ।’
सन् १९७० को दशक । सिंगो दक्षिण एसियामा बढ्दो राजनीतिक उथलपुथल। पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर स्वतन्त्र बंगलादेश निर्माण । अनि सिक्किमको भारतमा विलय । विरोधीलाई थुनेर भारतमा इन्दिरा गान्धीले चलाएको तानाशाही चक्र ।नेपालमा नयाँ राजा वीरेन्द्रको सत्तारोहण । सत्ताका लागि पञ्चहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा । मुलुकको भूराजनीति र सिंगो दक्षिण एसियामा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले भारत प्रवास रहेका बीपी सशंकित थिए ।
उता, राजा र बीपीबीच के सहमति भयो भनेर दिल्लीलाई रिपोर्टिङ गर्न नपाउँदा भारतीय दूतावासमा छटपटी सुरु भयो । डा. पाण्डे सुनाउँछन्, ‘राजदूत फोनमा भन्न थाले— डाक्टरसाप मेरो स्वास्थ्य जाँच गरिदिनुपर्‍यो, हर्टएट्याक नै होलाजस्तो छ ।’ यसपछि डा. पाण्डे झनै डराए, प्रधानमन्त्री गिरीले थुन्ने थम्की दिएकै थिए । ‘राजदूतलाईभेट्यो भने त झन् भारतीय एजेन्टकै बिल्ला लाइदिने पो हुन् कि ? म अर्कै डाक्टरलाई देखाउन सल्लाह दिएर उम्किएँ,’ उनी भन्छन् ।
बीपीको मेलमिलापको नीति राम्रैसँग बुझेका गिरिजाप्रसाद पनि अन्तिम समयसम्म राजसंस्था फालिहाल्ने निचोडमा पुगिसकेका थिएनन् । शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रबाट जस्तोसुकै अपमानित हुनुपरे पनि उनीआलंकारिक राजसंस्था राख्ने पक्षमै थिए । राजालाई विश्वास दिलाउन उनले छोरी सुजाता र विदेश मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेलाई खटाएका थिए । कोइरालाको बानी नै हो, एउटै मिसनका लागि एकैपटक धेरै मानिसलाई परिचालन गर्ने । २०६४ को दसैंताका कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कोइरालाको जीवनीमा आधारित मेरो ‘सो’ का लागि अन्तर्वार्ता लिन विराटनगर गएको थिएँ । त्यही मौकामा टेलिभिजनमा तत्काल प्रसारण नगर्ने सर्तमा उनले भनेका थिए, ‘मैले बेबी किङको प्रस्ताव राखेको हुँ । तर राजाले ‘बेबी किङ अन माई डेथ बडी’ भन्ने सन्देश पठाए । अब त राजा रहँदै रहँदैनन् ।’
(पत्रकार नेपालको निर्माणाधीन डकुमेन्ट्री ‘बीपीको राजद्रोह’ बाट)